Ukusheshisa Ipayipi Lakho nge-Automated Lead Generation | Martech Zone
Ukusheshisa Ipayipi Lakho nge-Automated Lead Generation
Zimbalwa izinkampani ezinamandla okuthengisa ukubiza wonke amathemba akhona. Lokho kusho ukuthi imvamisa ishiyelwa ethubeni noma umuzwa wamathumbu wokuthi yimaphi amathemba okufanele uchithe isikhathi esiningi ngawo. Kaningi kunalokho, lokhu kusho inhlekelele ezinkampanini. Bachitha isikhathi kumathemba angenakuze aguqulwe ngenkathi kungenzeka babe nemikhombandlela eshisayo futhi elungele ukwenza ibhizinisi.
Isizukulwane sokuhola esizenzakalelayo amapulatifomu anikezela ngendlela ehlukile lapho imikhondo ihanjiswa khona manjalo futhi ivame ukuthola amaphuzu ngokuthanda kwabo ukuvala. Nge-database ehlanzekile kanye ne-firmagraphics efanelekile, i-database ehamba phambili ingaguqulwa ibe inqubo esiza iqembu lakho lokumaketha nelokuthengisa ukuthi libone amasu asebenzayo - kusuka embonweni womkhankaso kuye ekusebenzeni.
Hlanganisa kukhiqize le infographic ukukhombisa izindlela ezimbili ezikhona kubakhangisi uma kukhulunywa ngamathemba abo namasu wokukhiqiza amakhasimende:
Izithiyo ezivamile zomgwaqo zikhona ngenqubo yokwenza isizukulwane sokuhola. Kubangela ukungasebenzi kahle okuningi nokungakwazi ukukala imbuyiselo ekutshalweni kwezimali. Ama-50% kuya kuma-65% wokuthengisa alahlekile uma umuntu oncintisana naye ephendula ngaphambi kokwenza ukuhola
Isizukulwane Esiphumelelayo Sokuhola isheshisa ipayipi lokuthengisa isebenzisa indlela ezenzakalelayo yokwenza isizukulwane engasetshenziswa kuzo zonke izigaba zokumaketha: ukuhlela, ukwethula, ukwenza, ukuhlaziya nokwenza kahle-okwandayo ukubuyisa otshalomali nokwakha amakhasimende ajabule. Izinkampani ezizenzekelayo ekuphathweni kwazo okuholayo zibona ukwanda kwe-10% kwemali engenayo ezinyangeni eziyi-6-9
Tags: okuzenzakalelayo isizukulwane sokuholainfographicukuhlanganisaukuhola ezishintshayoimikhondoUkunika Amandla Ukuthengisa